Nooca cusub ee PeerTube 2.3 horay ayaa loo soo saaray waana kuwan wararkiisa | Laga soo bilaabo Linux
Nooca cusub ee PeerTube 2.3 horey ayaa loo sii daayay sidoo kale wuxuu ku biirayaa shuruudaha loo dhan yahay
Dhawaan daabacaadda cusub ee PeerTube 2.3 ayaa la daabacay, taas oo ah barxad baahsan oo loogu talagalay abaabulka martigelinta fiidiyowga iyo baahinta fiidiyowga. PeerTube waxay bixisaa beddel iibiya-madaxbannaan oo YouTube ah, Dailymotion, iyo Vimeo, iyadoo la adeegsanayo shabakad qaybinta waxyaabaha ku saleysan P2P iyo isku xirka daalacayaasha booqdayaasha.
Qaabka cusub xoogaa horumar ah ayaa muuqda taasi waa socotaa diiradda saaray shabakadaha federaaliga ah, tayaynta booska shaashadda, qalabka qufulka otomaatigga ah (alfa) kuwa kale, marka lagu daro kuwa horumariya, ka dib isbeddelka guud ee adeegsiga ereyo loo dhan yahay, qaabkan cusub shaqada "Fiidiyowyada liiska madow" waxaa loo beddelay "fiidiyowyada xannibaadda / xayiraadda".
Kuwa aan ka warqabin PeerTube waa inay ogaadaan in tan waxay ku saleysan tahay isticmaalka WebTorrent, ku shaqeynaya biraawsar waxayna adeegsataa teknolojiyada WebRTC si ay u dhisto kanaal isgaarsiineed oo toos ah P2P oo u dhexeeya biraawsarka iyo borotokoolka ActivityPub, taasoo u oggolaanaysa server-yada kaladuwan inay ku xirnaadaan fiidiyowga shabakadda guud ee federaaliga ah ee booqdayaashu ay ku lug leeyihiin gudbinta waxyaabaha ayna leeyihiin awood u lahaanshaha rukummada iyo helitaanka ogeysiisyada fiidiyowyada cusub.
Iskuxirka websaydhka ee ay bixiso mashruuca waxaa lagu dhisay iyadoo la adeegsanayo qaabdhismeedka xagalka ah.
Shabakada isku xiran ee PeerTube waxaa loo sameeyay beel ka mid ah server-yada yar yar martigelinta fiidiyowga isku xidhan, mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay maamulkiisa iyo xeerarkiisa u gaarka ah waa la qaadan karaa.
Server kasta oo leh fiidiyow wuxuu ciyaaraa doorka la midka ah BitTorrent, taas oo ay ku yaalliin xisaabaadka isticmaalaha adeegaan iyo fiidiyowyadooda.
Aqoonsiga isticmaalaha ayaa lagu sameeyay qaab "@ username @ server_domain". Wareejinta xogta inta lagu gudajiro daawashada waxaa si toos ah looga sameeyaa daalacayaasha booqdayaasha kale ee daawanaya waxyaabaha.
Marka lagu daro u qeybinta taraafikada isticmaaleyaasha daawada fiidiyowga, PeerTube sidoo kale waxay u oggolaaneysaa bogagga u sii daayay qorayaasha meelaynta fiidiyowga ee ugu horreeya keydso fiidiyowyada qorayaasha kale, sameynta shabakad la qeybiyay kaliya maahan macaamiisha, laakiin sidoo kale waxay ka imaanayaan server-yada, iyo sidoo kale bixinta dulqaad dulqaad.
Astaamaha ugu muhiimsan ee cusub ee PeerTube 2.3
Qeybtan cusub mid ka mid ah riwaayadihii soo baxay ayaa ku jira hababka la hagaajiyay ee lagu dhisayo shabakadaha isku xiran, ilaa hada qaabeynta dheeraad ah ayaa la siiyaa si loogu sii daayo fiidiyowga shabakadaha kale ee aan ku jirin liisaska dadweynaha.
Intaa waxaa dheer sidoo kale taageerida kala soocida feylasha fiidiyowga ee xalinta shaashadda ayaa la hirgeliyey kala dambayn Faahfaahinta shayga fiidiyowga oo buuxa waxaa lagu bixiyaa ActivityPub.
Riwaayad kale oo la socota nuqulkan cusubi waa taas nooc alfa ah oo ah Fiidiyaha Furaha Furaha Awoodda ayaa la soo jeediyay si loogu ogolaado xanibaada fiidiyowyada iyada oo ku saleysan liisaska xannibaadda dadweynaha.
Dhinaca kale PeerTube 2.3, hadda dhexdhexaadiyeyaashu waxay awood u leeyihiin inay tirtirto faallooyinka tiro ahaan koontada la siiyay oo dami xisaabaadka markaad daawaneyso thumbnails. Caawinaad dheeraad ah loogu daray go'aaminta sababaha tirtirka caadiga ah.
Ayaa lagu daray taageerada raadinta adduunka (naafo ahaan ayaa ubaahan oo waxay ubaahantahay firfircooni maamule) iyo adeegsiga dhamaan shaashadda banaan ee la heli karo ayaa lafiiciyay markii lasoo bandhigayay shabakad yar yar.
Maamuluhu wuxuu awood u leeyahay inuu qeexo bannerka lagu soo bandhigo bogagga tusaalaha hadda ee PeerTube.
Ka soo horjeedka fiidiyowga iyo macluumaadka kanaalka ayaa lagu daray bogga "Muuqaaladayda".
Naqshadeynta liiska fudud ee ku-xirnaanta maamulka.
Waxay siisay awood ay ku xakameyso marin u helka RSS quusin leh fiidiyowyo cusub oo loogu talagalay kanaallo gaar ah iyo koontooyin.
Ugu dambeyntii, haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato, waad hubin kartaa liiska buuxa ee isbeddelada iyo sidoo kale xiriiriyeyaasha soo dejinta Xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Nooca cusub ee PeerTube 2.3 horey ayaa loo sii daayay sidoo kale wuxuu ku biirayaa shuruudaha loo dhan yahay
Qalabka GNU / Linux: Shirkadaha iyo Kumbuyuutarrada leh GNU / Linux sanduuqa